၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲမတိုငျမီ ၂၀၁၅ စကျတငျဘာလ (၂၅) ရကျနထေု့တျ နိရဉ်ဇရာ သတငျးဂြာနယျတှငျ ထညျ့သှငျးဖျောပွခဲ့သော ဦးကြျောဇောဦး နှငျ့ အငျတာဗြူး – Kyaw Zaw Oo's Blog
September 25, 2015 December 10, 2021 web_master
၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲမတိုငျမီ ၂၀၁၅ စကျတငျဘာလ (၂၅) ရကျနထေု့တျ နိရဉ်ဇရာ သတငျးဂြာနယျတှငျ ထညျ့သှငျးဖျောပွခဲ့သော ဦးကြျောဇောဦး နှငျ့ အငျတာဗြူး
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့ထုတ် နိရဉ္ဇရာ သတင်းဂျာနယ်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သော ဦးကျော်ဇောဦး နှင့် အင်တာဗျူးအား ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
စစ်တွေမြို့နယ်အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒနယ်မြေမှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကိုကျော်ဇောဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
၂၀၁၅-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ဂရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နိုင်ငံရေးသမား လူကြီးများသာမက လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် နိုင်ငံရေးသမား အများအပြားလည်း သက်ဆိုင်ရာပါတီများ ကိုယ်စားပြု၍သော်လည်းကောင်း ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် မိမိနေထိုင်ရာမြို့နယ်များကို ကိုယ်စားပြု၍သော်လည်းကောင်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအထဲတွင် မိခင်ပါတီရှိပါလျက် မိခင်ပါတီမှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရခဲ့သဖြင့် စစ်တွေမြို့နယ် အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒနယ်မှ တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုကျော်ဇောဦးလည်း ပါဝင်သည်။ ကိုကျော်ဇောဦးသည် တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် လျှောက်လွှာ တင်ပြီးမှ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ကိုယ်စားလှယ်အရည်အချင်း မပြည့်မီဟုဆိုကာ စစ်တွေခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပယ်ချခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အယူခံဝင်ခဲ့ရာ အယူခံအောင်မြင်ခဲ့သဖြင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။ နိရဉ္ဇရာသတင်းဌာနမှ ကိုစံမောင်သန်းက ကိုကျော်ဇောဦးအား တွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းထားချက်များကို တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
မေး။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ ဦးကျော်ဇောဦးကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှာ ရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီးတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်က အပယ်ခံရတယ်လို့ ကြားလိုက်ရတယ်။ ဘယ်အချက်နဲ့ငြိတာပါလဲ။
ဖြေ။ ကျွန်တော့်ကို အဓိကတော့ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်လောက်က ၆ လလောက် သွားပြီး တော့ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်နဲ့ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်မြကျော်က နေပြီးတော့ အဲဒီဟာက ကျွန်တော်ဟာ ၁၀နှစ်ဆက်တိုက် တိုင်းပြည်ထဲမှာ နေတဲ့သူမဟုတ် ဆိုပြီးတော့ တိုင်ပါတယ်။ တိုင်တဲ့အတွက် ခရိုင်ကော်မရှင်က စုံစမ်းတဲ့အခါမှာ သူ့မှာတော့ သက်သေခံ အထောက်အထားအနေနဲ့ ဘာတွေကို တင်ပြထားတယ် ဆိုတာတော့ မသိဘူး။ ဆိုတော့ ကျွန်တော့် ကို စစ်ဆေးတဲ့အခါ ပတ်(စ်)ပို့နဲ့ သွားတာမှန်တယ်၊ ဗီဇာနဲ့သွားတာမှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အိန္ဒိယကို တစ်လဗီဇာနဲ့သွားပြီးတော့ အာဖဂန်တစ္စတန်ကို သွားဖို့အတွက် ဗီဇာထပ်ခံတယ်။ ပြီးတော့ အာဖဂန်တစ္စတန်မှာ ဗီဇာထပ်တိုးပြီး နေခဲ့တာမှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗမာပြည်ကထွက်တဲ့အခါမှာ ၁လဗီဇာနဲ့ ထွက်တာ ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ဘာကြောင့်မို့လို့ တစ်လဗီဇာကို ကျော်ပြီးတော့ ဟိုးဘက်မှာ အကြာကြီး ခြောက်လဲကာ နေခဲ့ရသလဲ၊ အဲဒါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့မညီဘူး။ အဲဒီဟာ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ နေပြီးတော့ အဲဒါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ မညီဘဲ ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ဟာ ၆ လ သက်တမ်းမပြည့်ဘူး ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံအတွင်း တစ်ဆက်တစပ်တည်း ဆယ်နှစ် နေထိုင်သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုသော အချက်အားဖြင့်) ကျွန်တော့်ကို ပယ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရွေးကောက်ခံနိုင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းတယ် ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ပယ်လိုက်ပါတယ်။ ဆိုတော့် ၇ ရက်အတွင်း ပြည်နယ်မှာ တဆင့် အယူခံနိုင်တယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် အယူခံပါတယ်။
အယူခံတဲ့အခါ ပြည်နယ်က ဆုံးဖြတ်တာက ဒီလိုမျိုး ပတ်(စ်)ပို့နဲ့ သွားခြင်းဟာ နိုင်ငံခြားကို တရားဝင်သွားတာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်က အခွန်ဆောင်ထားပါတယ်။ အဲဒီလိုအခွန်ဆောင်ထားတဲ့ နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ပြည်နယ်က ပြောတာက တစ်အချက် ပတ်(စ်)ပို့နဲ့ တရားဝင်သွားတာဖြစ်တယ်၊ နှစ်အချက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နည်းဥပဒေမှာဆိုရင် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ (၂၇) ရှင်းလင်းချက် (၂) မှာဆိုရင် တိုင်ကြားမယ်ဆိုရင် ကန့်ကွက်သူ ဘက်မှ ခိုင်လုံတဲ့သက်သေ (သို့မဟုတ်) အထောက်အထား၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်း၏ မှန်ကန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (သို့မဟုတ်) မှတ်တမ်းမိတ္တူ အမှန်တစ်ခုခုကို တင်ပြရမယ်။ ထိုသို့ တင်ပြခြင်းမရှိပါက ထိုကန့်ကွက်ချက်ကို အရေးမယူရ ဟု ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ ဆိုတော့ ပြည်နယ်ကသုံးသပ်တာက ကန့်ကွက်သူဦးအောင်မြကျော်အနေဖြင့် ခိုင်လုံ သော သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုခုကို တစ်စုံတရာတင်ပြခြင်းမတွေ့ရ ဆိုပြီး သုံးသပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ (ခရိုင်ကော်မရှင်ရဲ့)ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်ပြီးတော့ ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အရွေးခံ ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
မေး။ အခု တသီးပုဂ္ဂလဆိုတော့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီနဲ့ လက်ရှိဆက်ဆံရေးက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ကျွန်တော် တသီးပုဂ္ဂလ အရွေးခံမယ်လို့ ဆိုကတည်းက ပါတီရုံးကို မရောက်တော့ဘူး။ ကျွန်တော် နိုင်ပြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ရှုံးပြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါကျမှ ပါတီနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှု ပြန်လုပ် မှာက တစ်ပိုင်းပေါ့။ အခုလောလာဆယ်မှာတော့ ကျွန်တော့်လူနဲ့ သီးခြား ကျွန်တော့် အောင်နိုင်ရေးအုပ်စုကလေးနဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီအုပ်စု ထဲမှာ ပါတီဝင်တွေပါမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ သူတို့ကို ကျွန်တော်က ပါတီကနေ နှုတ်ထွက်ခိုင်းပါမယ်။ နောက်မှပဲ ပြန်ဝင်ရင်လည်း ၀င်ကြပေါ့။ ဒီလိုမျိုး ကင်းကင်းရှင်းရှင်း လုပ်သွားမှာပါ။
မေး။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအနေနဲ့ ဘာတွေ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားသလဲ။ ဘယ်နေ့မှာ စတင်ပြီးတော့ မဲဆွယ်မှာလဲ။
ဖြေ။ ကျွန်တော် အခုလောလောဆယ်တော့ အေးအေးပဲ ရှိနေသေးတယ်။ အေးအေးပဲဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲ မစခင် တစ်လကိုပဲ ဖိဖိစီးစီးနဲ့ လုပ်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။
မေး။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်တဲ့အခါ မြို့ပေါ်အပြင် နယ်တွေကိုလည်း ဆင်းမှာလား။
မေး။ ဘာတွေကို အဓိကထားပြီးတော့ စည်းရုံးရေးလုပ်မှာလဲ။
ဖြေ။ အဓိကတော့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီထဲကို ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ သွားတယ်ဆိုရင် ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီရဲ့ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက် သုံးရပ်ကို ကိုင်တွယ်ပြီးတော့ သွားရမယ်။ အခုလောလောဆယ် တသီးပုဂ္ဂလလည်းဖြစ်တယ် ဆိုတော့ ကိုယ့်မှာ ကိုယ်အားသန်တဲ့ မူဝါဒကို ကိုင်ပြီးသွားရမှာပါ။
မေး။ ဆောင်ပုဒ်အနေနဲ့ ဘာတွေကို ရွေးချယ်ထားလဲ။
ဖြေ။ Logo တစ်ခုလိုတော့ တသီးပုဂ္ဂလ Logo အနေနဲ့ လုပ်တဲ့အခါ အဖြူ-အနီ နောက်ခံမှာ အပြာရောင် အနားကွပ်နဲ့ပေါ့။ အဲဒီအရောင် ၃ ရောင် ဟာဆိုရင် ရခိုင်တို့ရဲ့ အရောင်ပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ သင်္ကေတ ၃ ခု ပါတယ်။ တစ်ခုက ရခိုင်တို့ရဲ့ အမျိုးသား အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ သီရိဝစ္စ၊ နောက် တစ်ခုက လက်သီးဆုပ်အမှတ်အသား solidarity ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လက်သီးဆုပ် အမှတ်အသား၊ နောက်တစ်ခုက တိုးတက်ရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးပေါ့။ ဒါတွေက ကျွန်တော်သွားနေတဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းကို ထင်ဟပ်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ဆိုရင် တစ်အချက် ကျွန်တော် ဘာအတွက် လုပ်မှာလဲ၊ ရခိုင်အမျိုးသားရေး၊ သီရိဝိစ္စဟာ ရခိုင်အမျိုးသားရေးကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ပြီးတော့ လက်သီးဆုပ်ကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ လက်သီးဆုပ်သဏ္ဍာန်ဆိုတာ solidarity သွေးစည်းညီညွတ်မှု ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးကို ရခိုင်လူမျိုးအတွက် တည်ဆောက်သွားပါမယ်။ တတိယတစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ တိုးတက်ရေးနဲ့သွားပါမယ်။ တိုးတက်ရေးဆိုတာ ရည်မှန်းတဲ့ လမ်းကို ဖြည်းဖြည်းချင်း သွားနိုင်ဖို့အတွက်၊ တော်လှန်ရေးဆိုတာကို မလုပ်ဘဲနဲ့ အင်အားပြည့်အောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် Capacity လူမျိုးတစ်မျိုးကို အင်အားပြည့်စေတဲ့ တိုးတက်ရေး၊ ဒီသုံးခု၊ ရခိုင် အမျိုးသားရေး၊ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတဲ့ မူသုံးခုနဲ့ ကျွန်တော် အလုပ် ဆက်လုပ်သွားမယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင်လည်း အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ ပြည်သူလူထုကို ရှင်းလင်း တင်ပြသွားမယ်။
မေး – ဆိုရင် တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ရှိနေလဲ။
ဖြေ – တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ . . . ၊ ကျွန်တော်က အရင် ၄-၅ နှစ် ဆက်တိုက်က ပါတီကို ဆက်တိုက် တည်ဆောက်လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရင် ပါတီအနေနဲ့ မ၀င်ရဘဲ တစ်သီးပုဂ္ဂလ၀င်ရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့၊ ကျွန်တော့်ကို အားပေးချင်တဲ့သူ ကျွန်တော့်ကိုရံပေးချင်တဲ့သူအားလုံးဟာ ပါတီထဲမှာဘဲ ရှိနေတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေ၊ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံး ပါတီထဲမှာပဲ ရှိနေပါတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့ကိုလည်း ပါတီက မထွက်စေချင်ဘူး။ မထွက်ကြပါနဲ့။ ကျန်ခဲ့ကြပါ ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်က ပြောခဲ့ရတယ်။ နေက်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကို ပါတီဝင် မဟုတ်တဲ့ သူတွေနဲ့ ဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားရပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ ရှိတာပေါ့လေ။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ ပါတီဝင်(အနေနဲ့ ဆို)ရင်တော့ ငွေကြေး အဲ့ဒီလောက်ကုန်ကျမှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်သီးပုဂ္ဂလဆိုတော့ အရင်တုန်းကထက် ထပ်ပြီးတော့ ရှာရမယ်၊ ထပ်ပြီးတော့ သုံးရမယ့်သဘော ရှိ တယ်။ ကျွန်တော့်ကို အားပေးတဲ့သူတွေက ပိုပြီး အားစိုက် ရမယ့် သဘောရှိတယ်။
မေး – လက်ရှိရခိုင့်နိုင်ငံရေးဖြစ်တည်မှုအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်လဲ၊ အားရစရာတွေ တွေ့ရဲ့လား။
ဖြေ – အားရစရာတွေ့လား ဆိုတော့ . . . ၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီရခိုင့်နိုင်ငံရေးမှာဆိုရင် အဓိကအနေနဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက ဦးဆောင်နေပါတယ်။ (ဒီလို)ဦးဆောင်နေမှု အခန်းကဏ္ဍကိုဆိုရင်လည်း ပြည်သူလူထု စိတ်ပျက်တာလည်းရှိမယ်၊ စိတ်ပျက်တဲ့ကာလလည်းရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အရေးကြီး ပြီဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အခါ ဒီပါတီကိုဝိုင်းရံရမယ် ဆိုပြီးတော့ ၀ိုင်းရံကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် မပြောချင်တာတွေ ရှိတယ်။ ပြောလိုက်ရင် ကိုယ်နာမှာ တော့ မဟုတ်ဘူး။ အများနစ်နာမယ်။ ကိုယ်ကနစ်နာနေတယ်။ ထုတ်မပြောချင်တဲ့အတွက် ထုတ်မပြောတာပါ။ တခါကဆိုရင်လည်း ဒေါက်တာအေးမောင် Messenger နဲ့အင်တာဗျူးတဲ့အခါ ထင်တယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးလက ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ရခိုင်ပါတီ ပြိုကွဲမယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အတွင်းမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေက သိတယ်။ အင်မတန်မှ ခံစားရခက်ခဲတဲ့ ဖုံးကွယ်ထားရတဲ့ ကဏ္ဍရှိတယ်။ ရခိုင့်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲမှာဆိုရင် အုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်မှုတွေရှိတယ်။ အနိုင်ကျင့်မှုတွေရှိတယ်။ တရားမျှတစွာ လုပ်တဲ့သူတွေကို မတရားလုပ်တဲ့သူတွေက ၀ိုင်းဝန်း အနိုင်ကျင့်မှုတွေ ရှိနေတယ်။ နေရာ ဘယ်နေရာမှာလို့တော့ မဆိုလိုတော့ဘူး။ ရှိနေလေတော့ ဘာပဲပြောပြော အဲ့ဒါတွေကို အမှန်တရားတစ်ခုခု ရောက်အောင် ကျွန်တော်တို့တွန်းပို့ပြီးတော့ ပုံဖော်သွားရပါမယ်။ စိတ်ရှည်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောရှိတယ်။
မေး – ရခိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ဖြစ်တည်နေမှုအပိုင်းတွေကိုလည်း ပြောပြပေးပါဦး။ ရခိုင် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အားသာချက်တွေ၊ အားနည်းချက်တွေကိုပါ။
ဖြေ – ရခိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာဆိုရင် အင်မတန်မှ အင်အားချိနဲ့နေပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ရှိရုံက လွဲလို့ပေါ့။ အဲဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ တိုးတက်ရေး၊ တိုးတက်ရေးလို့ ပြောနေကြတယ်။ RNDP ထူထောင်တုန်းကဆိုရင်လည်း တိုးတက်ရေးဆိုတဲ့ မူဝါဒကိုကိုင်ပြီးတော့ပြောကြတယ်။ အခုဆိုရင် လည်း ကျွန်တော်ဟာ တိုးတက်ရေးကိုပဲ ကိုင်စွဲထားတယ်။ ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ ဆိုရင်လည်း ပြည်နယ်ကို အာရုံစိုက်မယ်။ ပညာ၊ ကျန်းမာ နဲ့ infrastructure ကို လုပ်ကြမယ် ဆိုပြီးတော့၊ အခြား ရည်မှန်းချက် အကြီးကြီးကို မသွားဘဲနဲ့ ပေါ့လေ။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြား infrastructure ကိုသာလုပ်ကြမယ်၊ ရခိုင်တိုးတက်ရေးအတွက်ပေါ့လေ၊ လုပ်ကြမယ်လို့ နိုင်ငံရေးသမားတချို့က အဲဒီလို ရည်မှန်းကြတယ်။ ကျွန်တော် အပါအ၀င်လည်း အဲဒီလိုပဲ ရည်မှန်းပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလို ရည်မှန်းရတာလဲဆိုတော့ အခြားဟာတွေမလုပ်မီ ဒီလူမျိုးဟာ အင်အားစည်ပင်ရမယ်။ အင်အား စည်ပင်ပြီးမှ တခြားဟာတွေကို တက်လှမ်းနိုင်ကြမယ်။ ရခိုင်လူထုအခြေအနေက အဲဒီလိုမျိုး ရောက် နေတယ်။ တခြားရည်မှန်းချက် သိပ်ကြီးကြီးမားမားသွားနိုင်မယ့် အားမရှိသေးဘူး။ ဒါကြောင့် infrastrure ပိုင်းကို တည်ဆောက်နိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့ ဆယ်နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ သာ တကယ်လုပ်နိုင်ရင် နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်လှမ်း နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေး – တကယ်တမ်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရရင် ပြည်သူအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ဘာတွေကို အဓိကဦးစားပေးအနေနဲ့ လုပ်သွားမှာလဲ။
ဖြေ – အဓိကအနေနဲ့ကတော့ အရင် intrastructure ပိုင်း နဲ့ ပညာ၊ ကျန်းမာ နဲ့ infrastructure ကို အဓိကတည်ဆောက်နိုင်ဖို့၊ တိုးတက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဟာတွေကို ကြိုးစားမယ်။ နောက်တစ်ခုက လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့၊ ပြောနေရတဲ့၊ သိသာတဲ့၊ မသိသာတဲ့ တရားမမျှတမှုတွေကို တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ရပ်တည်သွားပါ့မယ်။ အဲဒီလို ရေတိုအလုပ်တွေကို လုပ်နေတာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ရေရှည်အလုပ်တွေအတွက်လည်းပဲ လမ်းကြောင်းတွေ လုပ်နိုင်တာတွေကို ကြိုပြီးတော့ ဆက်လုပ် သွားပါမယ်။
မေး – နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ရခိုင်လူထုကို ဘာတွေ ပြောကြားချင်ပါသလဲ။
ဖြေ – ညီညွတ်တယ်၊ ညီညွတ်ရေး ညီညွတ်ရေးလို့ ပြောကြတယ်ဆိုရင် . . . ၊ သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဖောက်ပြန်ရေးသမားတွေ၊ ရခိုင်အမျိုးသားရေး နာမည်ခံဖောက်ပြန်ရေးသမားတွေ ညီညွတ်ရင် ကိုယ့်အတွက် ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူး။ စားဖားတွေညီညွတ်လို့ ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။ အဲဒါကြောင့် တကယ့်ရခိုင်ပြည်အတွက် အနစ်နာခံလို့လုပ်ကြမယ့်သူတွေ ညီညွတ်မှပဲ ရခိုင်ပြည် အကျိုးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်။ အဲဒါက ဒီခေတ်ဒီကာလမှာ သတိထားရမယ့် အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
နိရဉ္ဇရာ – ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးပါပဲ။
၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲမတိုငျမီ ၂၀၁၅ စကျတငျဘာလ (၂၅) ရကျနထေု့တျ နိရဉ်ဇရာ သတငျးဂြာနယျတှငျ ထညျ့သှငျးဖျောပွခဲ့သော ဦးကြျောဇောဦး နှငျ့ အငျတာဗြူးအား ဖျောပွလိုကျပါသညျ။
စဈတှမွေို့နယျအမှတျ(၂) မဲဆန်ဒနယျမွမှေ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ တဈသီးပုဂ်ဂလ ကိုယျစားလှယျလောငျး ကိုကြျောဇောဦးနှငျ့ တှဆေုံ့ခွငျး
၂၀၁၅-ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ ဂရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပမညျ့အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ရခိုငျပွညျနယျမှ နိုငျငံရေးသမား လူကွီးမြားသာမက လူငယျ၊ လူလတျပိုငျးအရှယျ နိုငျငံရေးသမား အမြားအပွားလညျး သကျဆိုငျရာပါတီမြား ကိုယျစားပွု၍သျောလညျးကောငျး ၊ တဈသီးပုဂ်ဂလကိုယျစားလှယျမြားအဖွဈ မိမိနထေိုငျရာမွို့နယျမြားကို ကိုယျစားပွု၍သျောလညျးကောငျး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမညျဖွဈပါသညျ။ ထိုအထဲတှငျ မိခငျပါတီရှိပါလကျြ မိခငျပါတီမှ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခှငျ့မရခဲ့သဖွငျ့ စဈတှမွေို့နယျ အမှတျ(၂) မဲဆန်ဒနယျမှ တဈသီးပုဂ်ဂလလှတျတျောကိုယျစားလှယျအဖွဈ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ကိုကြျောဇောဦးလညျး ပါဝငျသညျ။ ကိုကြျောဇောဦးသညျ တဈသီးပုဂ်ဂလကိုယျစားလှယျအဖွဈ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရနျ လြှောကျလှာ တငျပွီးမှ နောကျထပျတဈကွိမျ ကိုယျစားလှယျအရညျအခငျြး မပွညျ့မီဟုဆိုကာ စဈတှခေရိုငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ပယျခခြဲ့သညျ။ နောကျပိုငျးတှငျ အယူခံဝငျခဲ့ရာ အယူခံအောငျမွငျခဲ့သဖွငျ့ လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပါဝငျယှဉျပွိုငျရနျ လိုအပျသညျ့ ရှေးကောကျပှဲ အောငျနိုငျရေးလုပျငနျးမြားကို ဆောငျရှကျနပွေီဖွဈသညျ။ နိရဉ်ဇရာသတငျးဌာနမှ ကိုစံမောငျသနျးက ကိုကြျောဇောဦးအား တှဆေုံ့ပွီး မေးမွနျးထားခကျြမြားကို တငျပွပေးလိုကျပါသညျ။
မေး။ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကနပွေီးတော့ ဦးကြျောဇောဦးကို လှတျတျောကိုယျစားလှယျတဈဦးမှာ ရှိသငျ့တဲ့ အရညျအခငျြးနဲ့ မကိုကျညီဘူးဆိုပွီးတော့ ကိုယျစားလှယျလောငျးအဖွဈက အပယျခံရတယျလို့ ကွားလိုကျရတယျ။ ဘယျအခကျြနဲ့ငွိတာပါလဲ။
ဖွေ။ ကြှနျတေျာ့ကို အဓိကတော့ အာဖဂနျနစ်စတနျကို လှနျခဲ့တဲ့ ၆ နှဈလောကျက ၆ လလောကျ သှားပွီး တော့ အလုပျလုပျခဲ့တယျ။ အဲဒါကို ကြှနျတျောနဲ့ ပွိုငျဘကျဖွဈတဲ့ ဦးအောငျမွကြျောက နပွေီးတော့ အဲဒီဟာက ကြှနျတျောဟာ ၁ဝနှဈဆကျတိုကျ တိုငျးပွညျထဲမှာ နတေဲ့သူမဟုတျ ဆိုပွီးတော့ တိုငျပါတယျ။ တိုငျတဲ့အတှကျ ခရိုငျကျောမရှငျက စုံစမျးတဲ့အခါမှာ သူ့မှာတော့ သကျသခေံ အထောကျအထားအနနေဲ့ ဘာတှကေို တငျပွထားတယျ ဆိုတာတော့ မသိဘူး။ ဆိုတော့ ကြှနျတေျာ့ ကို စဈဆေးတဲ့အခါ ပတျ(ဈ)ပို့နဲ့ သှားတာမှနျတယျ၊ ဗီဇာနဲ့သှားတာမှနျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောဟာ အိန်ဒိယကို တဈလဗီဇာနဲ့သှားပွီးတော့ အာဖဂနျတစ်စတနျကို သှားဖို့အတှကျ ဗီဇာထပျခံတယျ။ ပွီးတော့ အာဖဂနျတစ်စတနျမှာ ဗီဇာထပျတိုးပွီး နခေဲ့တာမှနျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဗမာပွညျကထှကျတဲ့အခါမှာ ၁လဗီဇာနဲ့ ထှကျတာ ဖွဈတယျ။ ပွီးတော့ ဘာကွောငျ့မို့လို့ တဈလဗီဇာကို ကြျောပွီးတော့ ဟိုးဘကျမှာ အကွာကွီး ခွောကျလဲကာ နခေဲ့ရသလဲ၊ အဲဒါ လုပျထုံးလုပျနညျးနဲ့မညီဘူး။ အဲဒီဟာ အကြိုးဆကျအနနေဲ့ နပွေီးတော့ အဲဒါက လုပျထုံးလုပျနညျးနဲ့ မညီဘဲ ထှကျတာဖွဈတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောဟာ ၆ လ သကျတမျးမပွညျ့ဘူး ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ (ဆိုလိုသညျမှာ နိုငျငံအတှငျး တဈဆကျတစပျတညျး ဆယျနှဈ နထေိုငျသူ မဟုတျဘူး ဆိုသော အခကျြအားဖွငျ့) ကြှနျတေျာ့ကို ပယျလိုကျပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ရှေးကောကျခံနိုငျတဲ့ ကိုယျစားလှယျ အရညျအခငျြး ပကျြယှငျးတယျ ဆိုပွီး သတျမှတျပွီးတော့ ကြှနျတေျာ့ကို ပယျလိုကျပါတယျ။ ဆိုတေျာ့ ၇ ရကျအတှငျး ပွညျနယျမှာ တဆငျ့ အယူခံနိုငျတယျ ဆိုတော့ ကြှနျတျော အယူခံပါတယျ။
အယူခံတဲ့အခါ ပွညျနယျက ဆုံးဖွတျတာက ဒီလိုမြိုး ပတျ(ဈ)ပို့နဲ့ သှားခွငျးဟာ နိုငျငံခွားကို တရားဝငျသှားတာဖွဈတယျ။ ကြှနျတျောက အခှနျဆောငျထားပါတယျ။ အဲဒီလိုအခှနျဆောငျထားတဲ့ နိုငျငံသား တဈယောကျဖွဈတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ပွညျနယျက ပွောတာက တဈအခကျြ ပတျ(ဈ)ပို့နဲ့ တရားဝငျသှားတာဖွဈတယျ၊ နှဈအခကျြ လုပျထုံးလုပျနညျး နညျးဥပဒမှောဆိုရငျ ပွညျနယျလှတျတျော ရှေးကောကျပှဲ နညျးဥပဒေ ပုဒျမ (၂၇) ရှငျးလငျးခကျြ (၂) မှာဆိုရငျ တိုငျကွားမယျဆိုရငျ ကနျ့ကှကျသူ ဘကျမှ ခိုငျလုံတဲ့သကျသေ (သို့မဟုတျ) အထောကျအထား၊ သကျဆိုငျရာဌာန (သို့မဟုတျ) အဖှဲ့အစညျး၏ မှနျကနျကွောငျးလကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (သို့မဟုတျ) မှတျတမျးမိတ်တူ အမှနျတဈခုခုကို တငျပွရမယျ။ ထိုသို့ တငျပွခွငျးမရှိပါက ထိုကနျ့ကှကျခကျြကို အရေးမယူရ ဟု ဖျောပွ ထားပါတယျ။ ဆိုတော့ ပွညျနယျကသုံးသပျတာက ကနျ့ကှကျသူဦးအောငျမွကြျောအနဖွေငျ့ ခိုငျလုံ သော သကျသအေထောကျအထားတဈခုခုကို တဈစုံတရာတငျပွခွငျးမတှရေ့ ဆိုပွီး သုံးသပျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ (ခရိုငျကျောမရှငျရဲ့)ဆုံးဖွတျခကျြကို ပွနျပွီးတော့ ပယျခလြိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ အရှေးခံ ခှငျ့ပွုလိုကျပါတယျ။
မေး။ အခု တသီးပုဂ်ဂလဆိုတော့ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီနဲ့ လကျရှိဆကျဆံရေးက ဘယျလိုရှိပါသလဲ။
ဖွေ။ ကြှနျတျော တသီးပုဂ်ဂလ အရှေးခံမယျလို့ ဆိုကတညျးက ပါတီရုံးကို မရောကျတော့ဘူး။ ကြှနျတျော နိုငျပွီးသညျဖွဈစေ၊ ရှုံးပွီးသညျဖွဈစေ၊ ရှေးကောကျပှဲပွီးတဲ့အခါကမြှ ပါတီနဲ့ ထိတှေ့ ဆကျဆံမှု ပွနျလုပျ မှာက တဈပိုငျးပေါ့။ အခုလောလာဆယျမှာတော့ ကြှနျတေျာ့လူနဲ့ သီးခွား ကြှနျတေျာ့ အောငျနိုငျရေးအုပျစုကလေးနဲ့ အလုပျလုပျဖို့ပွငျဆငျနပေါတယျ။ တကယျလို့ အဲဒီအုပျစု ထဲမှာ ပါတီဝငျတှပေါမယျဆိုရငျလညျးပဲ သူတို့ကို ကြှနျတျောက ပါတီကနေ နှုတျထှကျခိုငျးပါမယျ။ နောကျမှပဲ ပွနျဝငျရငျလညျး ဝငျကွပေါ့။ ဒီလိုမြိုး ကငျးကငျးရှငျးရှငျး လုပျသှားမှာပါ။
မေး။ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးအနနေဲ့ ဘာတှေ ဘာတှေ ပွငျဆငျထားသလဲ။ ဘယျနမှေ့ာ စတငျပွီးတော့ မဲဆှယျမှာလဲ။
ဖွေ။ ကြှနျတျော အခုလောလောဆယျတော့ အေးအေးပဲ ရှိနသေေးတယျ။ အေးအေးပဲဆိုရငျ ရှေးကောကျပှဲ မစခငျ တဈလကိုပဲ ဖိဖိစီးစီးနဲ့ လုပျဖို့ ရညျမှနျးထားပါတယျ။
မေး။ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးလုပျတဲ့အခါ မွို့ပျေါအပွငျ နယျတှကေိုလညျး ဆငျးမှာလား။
မေး။ ဘာတှကေို အဓိကထားပွီးတော့ စညျးရုံးရေးလုပျမှာလဲ။
ဖွေ။ အဓိကတော့ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီထဲကို ကိုယျစားပွုပွီးတော့ သှားတယျဆိုရငျ ရခိုငျအမြိုးသား ပါတီရဲ့ မူဝါဒ၊ ရညျမှနျးခကျြ သုံးရပျကို ကိုငျတှယျပွီးတော့ သှားရမယျ။ အခုလောလောဆယျ တသီးပုဂ်ဂလလညျးဖွဈတယျ ဆိုတော့ ကိုယျ့မှာ ကိုယျအားသနျတဲ့ မူဝါဒကို ကိုငျပွီးသှားရမှာပါ။
မေး။ ဆောငျပုဒျအနနေဲ့ ဘာတှကေို ရှေးခယျြထားလဲ။
ဖွေ။ Logo တဈခုလိုတော့ တသီးပုဂ်ဂလ Logo အနနေဲ့ လုပျတဲ့အခါ အဖွူ-အနီ နောကျခံမှာ အပွာရောငျ အနားကှပျနဲ့ပေါ့။ အဲဒီအရောငျ ၃ ရောငျ ဟာဆိုရငျ ရခိုငျတို့ရဲ့ အရောငျပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ သင်ျကတေ ၃ ခု ပါတယျ။ တဈခုက ရခိုငျတို့ရဲ့ အမြိုးသား အထိမျးအမှတျဖွဈတဲ့ သီရိဝစ်စ၊ နောကျ တဈခုက လကျသီးဆုပျအမှတျအသား solidarity ကို ကိုယျစားပွုတဲ့ လကျသီးဆုပျ အမှတျအသား၊ နောကျတဈခုက တိုးတကျရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးပေါ့။ ဒါတှကေ ကြှနျတျောသှားနတေဲ့ နိုငျငံရေး လမျးကွောငျးကို ထငျဟပျတဲ့ အရာတှေ ဖွဈတယျ။ ဥပမာ ဆိုရငျ တဈအခကျြ ကြှနျတျော ဘာအတှကျ လုပျမှာလဲ၊ ရခိုငျအမြိုးသားရေး၊ သီရိဝိစ်စဟာ ရခိုငျအမြိုးသားရေးကို ကိုယျစားပွုတယျ။ ပွီးတော့ လကျသီးဆုပျကတော့ တဈကမ်ဘာလုံးမှာ လကျသီးဆုပျသဏ်ဍာနျဆိုတာ solidarity သှေးစညျးညီညှတျမှု ကို ကိုယျစားပွုပါတယျ။ သှေးစညျး ညီညှတျရေးကို ရခိုငျလူမြိုးအတှကျ တညျဆောကျသှားပါမယျ။ တတိယတဈခကျြက ကြှနျတျောတို့ တိုးတကျရေးနဲ့သှားပါမယျ။ တိုးတကျရေးဆိုတာ ရညျမှနျးတဲ့ လမျးကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး သှားနိုငျဖို့အတှကျ၊ တျောလှနျရေးဆိုတာကို မလုပျဘဲနဲ့ အငျအားပွညျ့အောငျ ကိုယျ့ဟာကိုယျ Capacity လူမြိုးတဈမြိုးကို အငျအားပွညျ့စတေဲ့ တိုးတကျရေး၊ ဒီသုံးခု၊ ရခိုငျ အမြိုးသားရေး၊ သှေးစညျးညီညှတျရေးနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဆိုတဲ့ မူသုံးခုနဲ့ ကြှနျတျော အလုပျ ဆကျလုပျသှားမယျ။ အရငျတုနျးကဆိုရငျလညျး အလုပျလုပျခဲ့ပါတယျလို့ ပွညျသူလူထုကို ရှငျးလငျး တငျပွသှားမယျ။
မေး – ဆိုရငျ တဈသီးပုဂ်ဂလအနနေဲ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ မဲဆှယျမှုပွုလုပျတဲ့အခါ ဘယျလို အခကျအခဲတှေ ရှိနလေဲ။
ဖွေ – တဈသီးပုဂ်ဂလအနနေဲ့ . . . ၊ ကြှနျတျောက အရငျ ၄-၅ နှဈ ဆကျတိုကျက ပါတီကို ဆကျတိုကျ တညျဆောကျလာခဲ့တဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဆိုရငျ ပါတီအနနေဲ့ မဝငျရဘဲ တဈသီးပုဂ်ဂလဝငျရတယျဆိုတော့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့၊ ကြှနျတေျာ့ကို အားပေးခငျြတဲ့သူ ကြှနျတေျာ့ကိုရံပေးခငျြတဲ့သူအားလုံးဟာ ပါတီထဲမှာဘဲ ရှိနတေယျ။ ကြှနျတေျာ့ကို ခဈြတဲ့သူတှေ၊ ရဲဘျောရဲဘကျတှအေားလုံး ပါတီထဲမှာပဲ ရှိနပေါတယျ။ ဆိုတော့ သူတို့ကိုလညျး ပါတီက မထှကျစခေငျြဘူး။ မထှကျကွပါနဲ့။ ကနျြခဲ့ကွပါ ဆိုပွီးတော့ ကြှနျတျောက ပွောခဲ့ရတယျ။ နကျေပွီးတော့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အောငျနိုငျရေးအဖှဲ့ကို ပါတီဝငျ မဟုတျတဲ့ သူတှနေဲ့ ဖှဲ့ဖို့ကွိုးစားရပါတယျ။ အခကျအခဲတှေ ရှိတာပေါ့လေ။ ပွီးတော့ နောကျတဈခကျြအနနေဲ့ ပါတီဝငျ(အနနေဲ့ ဆို)ရငျတော့ ငှကွေေး အဲ့ဒီလောကျကုနျကမြှာမဟုတျဘူး။ တဈသီးပုဂ်ဂလဆိုတော့ အရငျတုနျးကထကျ ထပျပွီးတော့ ရှာရမယျ၊ ထပျပွီးတော့ သုံးရမယျ့သဘော ရှိ တယျ။ ကြှနျတေျာ့ကို အားပေးတဲ့သူတှကေ ပိုပွီး အားစိုကျ ရမယျ့ သဘောရှိတယျ။
မေး – လကျရှိရခိုငျ့နိုငျငံရေးဖွဈတညျမှုအပျေါမှာ ဘယျလိုမွငျလဲ၊ အားရစရာတှေ တှရေဲ့လား။
ဖွေ – အားရစရာတှလေ့ား ဆိုတော့ . . . ၊ ကြှနျတျောတို့ ဒီရခိုငျ့နိုငျငံရေးမှာဆိုရငျ အဓိကအနနေဲ့ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီက ဦးဆောငျနပေါတယျ။ (ဒီလို)ဦးဆောငျနမှေု အခနျးကဏ်ဍကိုဆိုရငျလညျး ပွညျသူလူထု စိတျပကျြတာလညျးရှိမယျ၊ စိတျပကျြတဲ့ကာလလညျးရှိမယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး အရေးကွီး ပွီဆိုရငျ ရှေးကောကျပှဲနီးလာတဲ့အခါ ဒီပါတီကိုဝိုငျးရံရမယျ ဆိုပွီးတော့ ၀ိုငျးရံကွတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈခါတဈခါ ကြှနျတျောတို့ကိုယျတိုငျ မပွောခငျြတာတှေ ရှိတယျ။ ပွောလိုကျရငျ ကိုယျနာမှာ တော့ မဟုတျဘူး။ အမြားနဈနာမယျ။ ကိုယျကနဈနာနတေယျ။ ထုတျမပွောခငျြတဲ့အတှကျ ထုတျမပွောတာပါ။ တခါကဆိုရငျလညျး ဒေါကျတာအေးမောငျ Messenger နဲ့အငျတာဗြူးတဲ့အခါ ထငျတယျ၊ လှနျခဲ့တဲ့ သုံးလေးလက ရှေးကောကျပှဲမတိုငျမီ ရခိုငျပါတီ ပွိုကှဲမယျ ဆိုပွီးတော့ပေါ့လေ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အတှငျးမှာလုပျနတေဲ့သူတှကေ သိတယျ။ အငျမတနျမှ ခံစားရခကျခဲတဲ့ ဖုံးကှယျထားရတဲ့ ကဏ်ဍရှိတယျ။ ရခိုငျ့နိုငျငံရေးနယျပယျထဲမှာဆိုရငျ အုပျစုဖှဲ့အားပွိုငျမှုတှရှေိတယျ။ အနိုငျကငျြ့မှုတှရှေိတယျ။ တရားမြှတစှာ လုပျတဲ့သူတှကေို မတရားလုပျတဲ့သူတှကေ ၀ိုငျးဝနျး အနိုငျကငျြ့မှုတှေ ရှိနတေယျ။ နရော ဘယျနရောမှာလို့တော့ မဆိုလိုတော့ဘူး။ ရှိနလေတေော့ ဘာပဲပွောပွော အဲ့ဒါတှကေို အမှနျတရားတဈခုခု ရောကျအောငျ ကြှနျတျောတို့တှနျးပို့ပွီးတော့ ပုံဖျောသှားရပါမယျ။ စိတျရှညျရမယျဆိုတဲ့ သဘောရှိတယျ။
မေး – ရခိုငျလူ့အဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ ဖွဈတညျနမှေုအပိုငျးတှကေိုလညျး ပွောပွပေးပါဦး။ ရခိုငျ လူ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့ အားသာခကျြတှေ၊ အားနညျးခကျြတှကေိုပါ။
ဖွေ – ရခိုငျလူ့အဖှဲ့အစညျးဟာဆိုရငျ အငျမတနျမှ အငျအားခြိနဲ့နပေါတယျ။ မြိုးခဈြစိတျဓါတျ ရှိရုံက လှဲလို့ပေါ့။ အဲဒါကွောငျ့မို့ ကြှနျတျောတို့ တိုးတကျရေး၊ တိုးတကျရေးလို့ ပွောနကွေတယျ။ RNDP ထူထောငျတုနျးကဆိုရငျလညျး တိုးတကျရေးဆိုတဲ့ မူဝါဒကိုကိုငျပွီးတော့ပွောကွတယျ။ အခုဆိုရငျ လညျး ကြှနျတျောဟာ တိုးတကျရေးကိုပဲ ကိုငျစှဲထားတယျ။ ဒေါကျတာအေးမောငျတို့ ဆိုရငျလညျး ပွညျနယျကို အာရုံစိုကျမယျ။ ပညာ၊ ကနျြးမာ နဲ့ infrastructure ကို လုပျကွမယျ ဆိုပွီးတော့၊ အခွား ရညျမှနျးခကျြ အကွီးကွီးကို မသှားဘဲနဲ့ ပေါ့လေ။ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေးနဲ့ အခွား infrastructure ကိုသာလုပျကွမယျ၊ ရခိုငျတိုးတကျရေးအတှကျပေါ့လေ၊ လုပျကွမယျလို့ နိုငျငံရေးသမားတခြို့က အဲဒီလို ရညျမှနျးကွတယျ။ ကြှနျတျော အပါအဝငျလညျး အဲဒီလိုပဲ ရညျမှနျးပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ ဒီလို ရညျမှနျးရတာလဲဆိုတော့ အခွားဟာတှမေလုပျမီ ဒီလူမြိုးဟာ အငျအားစညျပငျရမယျ။ အငျအား စညျပငျပွီးမှ တခွားဟာတှကေို တကျလှမျးနိုငျကွမယျ။ ရခိုငျလူထုအခွအေနကေ အဲဒီလိုမြိုး ရောကျ နတေယျ။ တခွားရညျမှနျးခကျြ သိပျကွီးကွီးမားမားသှားနိုငျမယျ့ အားမရှိသေးဘူး။ ဒါကွောငျ့ infrastrure ပိုငျးကို တညျဆောကျနိုငျရငျ ကြှနျတျောတို့ ဆယျနှဈ၊ အနှဈ ၂၀ သာ တကယျလုပျနိုငျရငျ နောကျတဈဆငျ့ကို တကျလှမျး နိုငျမယျလို့ ထငျပါတယျ။
မေး – တကယျတမျး ရှေးခယျြတငျမွှောကျခံခဲ့ရရငျ ပွညျသူအတှကျ ရခိုငျပွညျနယျအတှကျ ဘာတှကေို အဓိကဦးစားပေးအနနေဲ့ လုပျသှားမှာလဲ။
ဖွေ – အဓိကအနနေဲ့ကတော့ အရငျ intrastructure ပိုငျး နဲ့ ပညာ၊ ကနျြးမာ နဲ့ infrastructure ကို အဓိကတညျဆောကျနိုငျဖို့၊ တိုးတကျတညျဆောကျနိုငျဖို့ ဟာတှကေို ကွိုးစားမယျ။ နောကျတဈခုက လူ့အဖှဲ့အစညျးအတှငျးမှာ ရှိနတေဲ့၊ ပွောနရေတဲ့၊ သိသာတဲ့၊ မသိသာတဲ့ တရားမမြှတမှုတှကေို တိုကျပှဲဝငျဖို့ ရပျတညျသှားပါ့မယျ။ အဲဒီလို ရတေိုအလုပျတှကေို လုပျနတောနဲ့ တပွိုငျနကျတညျးမှာပဲ ရရှေညျအလုပျတှအေတှကျလညျးပဲ လမျးကွောငျးတှေ လုပျနိုငျတာတှကေို ကွိုပွီးတော့ ဆကျလုပျ သှားပါမယျ။
မေး – နောကျဆုံးအနနေဲ့ ရခိုငျလူထုကို ဘာတှေ ပွောကွားခငျြပါသလဲ။
ဖွေ – ညီညှတျတယျ၊ ညီညှတျရေး ညီညှတျရေးလို့ ပွောကွတယျဆိုရငျ . . . ၊ သှေးစညျးညီညှတျရေး ဆိုတဲ့နရောမှာ ဖောကျပွနျရေးသမားတှေ၊ ရခိုငျအမြိုးသားရေး နာမညျခံဖောကျပွနျရေးသမားတှေ ညီညှတျရငျ ကိုယျ့အတှကျ ဘာမှအကြိုးမရှိပါဘူး။ စားဖားတှညေီညှတျလို့ ဘာမှအကြိုးမရှိဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ တကယျ့ရခိုငျပွညျအတှကျ အနဈနာခံလို့လုပျကွမယျ့သူတှေ ညီညှတျမှပဲ ရခိုငျပွညျ အကြိုးကို ဖျောဆောငျနိုငျမယျ။ အဲဒါက ဒီခတျေဒီကာလမှာ သတိထားရမယျ့ အခကျြတဈခကျြ ဖွဈပါတယျ။
နိရဉ်ဇရာ – ဟုတျကဲ့။ ကြေးဇူးပါပဲ။
Previous Video | ဦးကြျောဇောဦး ၏ “ငါရို့ဇာလုပျကတျဖို့လဲ” ဟောပွောခကျြ
Next Myanmar Times | In Sittwe, an independent candidate in name only tells ofasplit within his party